Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1587
Faritra telo : andrasana ny fanombohana ny Pic II
Par Taratra sur 14/01/2016 Divers, NS Malagasy
Andrasana ny fanombohana ny Pic II (Pôle intégrée de croissance) any amin’ny faritra Anosy, Atsimo Andrefana ary Diana, izay nahazoana famatsiam-bola 50 tapitrisa dolara avy amin’ny Banky iraisam-pirenena. Tetikasa atokana indrindra momba ny fambolena, famatsiana angovo, fotodrafitrasa, famatsian-drano ary fizahantany. Betsaka ny tetikasa tokony hatao amin’ireo sehatra ireo any amin’ireo faritra telo ireo fa miankina […]
Fikarakarana fifidianana : nilaza ho afaka mitondra fanitsiana lalàna ny Ceni
Par Taratra sur 14/01/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Ho hita eo indray amin’ny fifidianana eo anivon’ny faritra sy ny faritany. « Afaka mitondra volavolam-panitsiana ny lalàna momba ny fifidianana izahay raha toa ka ilaina izany », hoy ny filohan’ny Ceni, ny mpisolovava Rakotomanana Hery, omaly tetsy Alarobia. Niteraka olana tamin’ireo fifidianana natao niarahana amin’ny Cenit teo aloha, ary mbola nodimbiasan’ny Ceni amin’izao fotoana izao ity resaka […]
Nampiasain’ny jiolahy : fantatra ny laharan’ny basy sy ny bala
Fantatra avokoa amin’izao fotoana izao ny laharan’ireo Kalachnikov miisa efatra, izay tsy nisy nofafana na nokikisana na iray aza, araka ny vaovao voaray avy amin’ny zandarimaria. Ohatra amin’izany ny laharana Culasse TP 9715 corps 1964 TP 97n couvercle JGP 7716. Eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny momba ireo basy sy bala 119 ary ilay grenady iray […]
Fanaovana visa hosoka sy fivadiham-pitokisana : vehivavy iray mpiasam-panjakana sy olona 11 niakatra fitsarana
Par Taratra sur 14/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Misy ny hosoka amin’ireny sampandraharam-panjakana ireny. Vazaha iray no lasibatra tamin’ny fanaovana visa hosoka. Olona 12 niakatra fampanoavana tamin’izany. Vehivavy iray tompon’andraikitra amin’ny sampandraharaham-panjakana any Antsirabe, voalaza fa nanao hosoka tamin’ny fanamboarana visa sy nivadiham-pitokisana, niakatra fitsarana, teny amin’ny fampanoavana omaly. Naverina natao fanadihadiana teny amin’ny zandary Fiadanana io ramatoa io sy olona 11 hafa […]
Malaimbady : kamiaobe miisa telo indray notafihin’ny dahalo
Dahalo miisa fito nitondra basim-borona no tompon’antoka tamin’ny fanafihana kamiaobe miisa telo, afakomaly alina tany amin’ny 16 km avaratr’i Malaimbady. Araka ny loharanom-baovao voaray, nobahanan’ireo jiolahy tamin’ny vatobe ny arabe ka tsy afa-nihetsika ireo kamiaobe ka nanao izay ho afany tamin’ny fandrobana ireo jiolahy. Vola mitentina 150 000 Ar, finday ary zava-pisotro misy gazy no lasan-dry […]
Mahajanga : tratra ny iray amin’ireo gadra nitsoaka
Saron’ny zandary avy teo amin’ny tetezana Fitim, fokontany Fafio, Mahajanga I ny iray tamin’ireo gadra nitsoaka ny fonja tao Mahajanga. Araka ny loharanom-baovao voaray, sendra nanao fisafoana ireo zandary no nahatsikaritra ity jiolahy ity nijorojoro teo amin’ny tetezana Fitim ka noraisim-potsiny teo izy. Nandray fepetra avy hatrany ny tompon’andraikitra misahana ny fiambenana ny fonja sy […]
Ankazoabo Atsimo : dahalo 4 lavon’ny miaramila
Dahalo efatra no lavon’ny balan’ny miaramila vokatry ny fifandonana teo amin’ ny roa tonta, maro ny naratra nefa nentin’ireo namany. Dahalo 60 lahy teo am-panomanana fanafihana no saron’ny miaramila avy amin’ny Rezimanta voalohany faritany fahadimy miandraikitra ny hetsika fahalemana any an-toerana, taorian’ny nialan’ireo miaramila avy aty Antananarivo. Niomana hanafika ny fokontany Tsinjorano kaominina Berenty izy […]
Par Taratra sur 14/01/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nambaran’ny talem-paritry ny filaminana anatiny, ao amin’ny faritra Atsinanana, ny kaomisera divizionera Lié, omaly, fa « tsy tokony havoaka ny fonja na koa homena Mop (Main d’œuvre pénal) ireo olona voaheloka amin’ny fakana an-keriny (kidnapping) ». Nohitsiny fa « tsy misy olona afaka manatanteraka izany afa tsy ireo mpitsara tompon’andraikitra ihany ». Araka ireny niaraha-nanaraka teto ireny, votsotra soa aman-tsara […]
Par Taratra sur 14/01/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny rano aloha dia misy, ary mbola ho lavitra izay ho farany… Miakatra manaraka ny ranon’i Sisaony sy Ikopa ny vidin-javatra rehetra eny an-tsena. Ny rehetra mihitsy! Ny hena, taloha aza tsy taka-bidy, mainka ny amin’izao fotoana izao. Ny vary, efa mahazatra ny fisondro-bidiny rehefa fahavaratra. Na ny anana filaofan’ny sahirana aza, simban’ny orana sy […]
Jean-Max Rakotomamonjy : « L’erreur est humaine »
Par Taratra sur 13/01/2016 NS Français, Opinion
Les membres du bureau national de coordination (BNC) au grand complet ont fait appel à la presse, hier à son siège à Antsahabe afin de donner leur version des faits à propos de la désignation de l’épouse de Jean-Max Rakotomamonjy comme candidate du parti « Libéralisme économique et action démocratique Fanilo » (Leader Fanilo).aux sénatoriales. De ce […]
Tenisy – «Afrique Australe 2016» : manohy ny lalany i Tsantaniony sy Sariaka
Par Taratra sur 13/01/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Misy mikatso fa misy kosa ny manohy mankany amin’ny fahombiazana ny voka-dalaon’ireo katitakely malagasy, miatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika Aostraly, sokajy U16. Niditra tamin’ny andro fahefatra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika Aostraly, taranja tenisy ho an’ny sokajy zandriny U16, omaly. Fihaonana izay tanterahina ao Pretoria, Afrika Atsimo. Mbola misongadina hatrany ireo mpilalao […]
Atletisma : hiatrika ny “Marathon de Dakar” i Hajanirina
Nahazo fanasana ary handeha hanatrika ny andiany voalohany amin’ny “Marathon de Dakar”, hatao ny alahady 14 febroary ho avy izao, Andriamparany Hajanirina, atletan’ny Cosfa. Araka ny fanambaran’ny tomponandraikitra avy ao amin’ny federasiona malagasin’ny atletisma (FMA), tamin’ny fihaonan’izy ireo, tamin’ny mpanao gazety, omaly, i Jean de la Croix, tompondakan’i Madagasikara, ny tokony hiatrika izany, saingy noho […]
Kung-Fu Wisa : hatao ny volana aogositra ny fifaninanam-pirenena
Par Taratra sur 13/01/2016 Divers, NS Malagasy
Nambaran-dRakotoarisoa Victor, filohan’ny federasiona malagasin’ny kung-fu Wisa, fa hotanterahina ny volana aogositra, ho avy izao, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara. Ankoatra izay, nisy ny dinika nifanaovana, tamin’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena sy ny an’ny mpitandro filaminana fa tsy maintsy manana “passeport sportif” avokoa ireo mpanao kung-fu Wisa, manerana ny Nosy. Anton’izany, mba hanavahana ny ara-dalàna sy […]
Fisotroan-dronono : tsy manan-kery intsony ny karatra taloha
Par Taratra sur 13/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tsy hanan-kery intsony ny karatry ny zokiolona mpandray vola fisotroan-dronono nosoloina ny volana novambra lasa teo amin’ny toerana 52, manomboka ny volana febroary izao. Ho an’ireo karatra nohavaozina ny volana desambra kosa, tsy azo ampiasaina izany manomboka ny volana marsa izao, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny fitantanam-bolan’ny mpiasam-panjakana, Razafintsalama Ihanta, omaly […]
Any atsimo : distrika efatra tratran’ny kere mivaivay
Raha tandindomin’ny todra-drano sy ny fihotsahan’ny tany ny mponina eto Antananarivo vokatry ny ora-mikija, mifanohitra tanteraka amin’izany ny zava-misy any atsimon’ny Nosy satria tsy mba mahita na dia erikerika aza, ritra ny renirano, maina ny tany, kere ny mponina. Raha ny tatitra nataon’ny tompon’andraikitra voalohany momba ny famatsian-drano any atsimo (AES), iharan’ny haintany mivaivay ny […]
Endrika amam-bika : haneho ny « Ironic Paper » i Tahina Rakotoarivony
Par Taratra sur 13/01/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Fampirantiana hairahan’ny ankehitriny. Hanokafan’ny Is’Art Galerie La Teinturerie Ampasanimalo ny hetsika ataony amin’ity taona ity, haneho ny « Ironic Paper » i Tahina Rakotoarivony, ny 14 janoary izao. Efa nahasarika ity mpanakanto manana ny maha izy azy ity tao anatin’ny 15 taona mahery ny tranga misy eo anivon’ny fiarahamonina. Ho an’ny « Ironic Paper » manokana, haneho ireo karazana […]
Faritra Melaky : vita ny teti-panajariana ny jono mandritra ny dimy taona
Nandrafitra ny teti-panajariana ny jono mandritra ny dimy taona ny faritra Melaky, ny faran’ny taona 2015. Taona maro izay, azo lazaina ho simba ny jono an-dranomasina any amin’iny fari-dranomasina andrefana iny. Potika ny jono nentim-paharazana hatramin’ny nidiran’ireo sambo vahiny any amin’iny faritra iny. Na amin’ny fotoana fikatonan’ny jono aza, mbola misy miditra ihany amin’ireo sambo […]
Rasolomampionona Hasimpirenena : “Be mpangataka indrindra ny fandovana tany”
Par Taratra sur 13/01/2016 Economie, NS Malagasy
Hanamora sy hanafaingana ny famindran-tompo ny tany nolovaina ny tsy fandoavana saram-pikarakarana. Hahazo titra koa ireo olona manajary ny tany nisoratra amin’ny voanjo. Nanamafy ny kabarin’ny filoham-pirenena, ny zoma lasa teo, ny tale jeneralin’ny Fananan-tany, Rasolomampionona Hasimpirenena. Toy ny fikarakarana maimaimpoana ny famindrana tompo ny tany amin’ny mpandova ato anatin’ny enim-bolana (janoary- jona). Nambarany fa […]
Loka « Joseph Ramanankamonjy » : hisy ny fampianarana manao hosodoko
Kanto miaina ary hanana ny hoaviny ny hosodoko malagasy. Manaporofo izany ny hanatontosan’ny fikambanana Joseph Ramanankamonjy ny « Prix Joseph Ramanankamonjy » andiany faharoa, ny 18 hatramin’ny 24 janoary, etsy amin’ny Tahala Rarihasina etsy Analakely. Mizara roa ity hetsika ity. Ny 18 hatramin’ny 22 janoary, hisy ny fampianarana manao sary hosodoko. Misokatra ho an’ny sokajin-taona rehetra izany. […]
Varotra iraisam-pirenena : mampiofana ao amin’ny INCC ny OMC
Nitondra sy nizara ny traikefany ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana amin’ny varotra sy ny fifaninanana (INCC) ny teknisianina roa avy amin’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny varotra (OMC). Fampiofanana ho an’ireo mpanabe sy ny mpianatra, hanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo. Anisan’ny lohahevitra ny fampahafantarana ny OMC, rafitra ambony indrindra eran-tany misahana sy mandrindra ny varotra iraisam-pirenena. Ny famaritana ny […]
Disadisa eo anivon’ny Leader Fanilo : manome fanazavana ny birao nasionaly
Par Taratra sur 13/01/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Misy ny disadisa eo anivon’ny antoko Leader Fanilo. Manome fanazavana ny eo anivon’ny birao nasionaly mpandrindra noho ny fampitsaharana azy ireo amin’ny asany… Toy ny tsy misy intsony eo anivon’ny antoko Leader Fanilo ny filankevi-draharahan’ny antoko Leader Fanilo, raha ny olona mandrafitra izany. Io no anisan’ny fanazavan’ny eo anivon’ny birao nasionaly mpandrindra ny antoko Leader […]
Mahajanga : nanitrikitrika ny fihoaram-pefy amin’ny fifidianana ny Mapar
Ny faritanin’Antsiranana sisa fa samy nahitana fihoaram-pefy sy tsy fanarahan-dalàna avokoa ny faritany hafa tamin’ny fifidianana loholona farany teo, raha miainga amin’ireo fitoriana sy fitarainana hatramin’izao. Nijoro vavolombelona sy nitondra porofo amin’ny tranga niseho tany amin’ny faritanin’i Mahajanga ny avy amin’ny Mapar. « Niharihary ny fizaram-bola nataon’ny prefet-n’i Mahajanga sy ny sefo distrika amin’ireo mpifidy vaventy […]
Tonia mpampanoa lalàna – SMM : « Tsy misy mpitsara tafiditra amin’ny raharaha kidnapping »
Hatramin’ny fiandohan’ny « Raharaha kidnapping » ka hatramin’ny fanavotana an’ i Arnaud, ny alatsinany teo, saika voatonontonona hatrany ny mpitsara. Nahitsin’ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany, Lauret Rajaona Thierry izany, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety omaly, tany amin’ny efitrano faharoan’ny lapan’ny Fitsarana ambony Toamasina. « Tsy mbola nisy mpitsara natao famotorana na nalaina […]
Par Taratra sur 13/01/2016 En Bref, NS Malagasy
Nambaran’ny filoha Rajaonarimampianina fa manana andraikitra amin’ny fampandrosoana ny Tafika. Navoitrany fa hohamafisina ny fanampiana ara-pitaovana azy ireo. Tafiditra amin’ny fanamarihana ny andron’ny manamboninahitra, omaly 12 janoary, izany ka niarahan’ny filoha nihazakazaka amin’ireo manamboninahitra teny Iavoloha. Nanao veloma ny filoham-pirenena teny Iavoloha ny ambasadaoron’i Afrika Atsimo, G. Grobler, omaly. Nisongadina tamin’ny dinika ny fiaraha-miasa eo […]
Manjakamiadana : tokantrano 100 ahina amin’ny fihotsahan’ny tany
Fokontany telo ao anatin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra no marefo amin’ny fihotsahan’ny tany aorian’ny rotsak’orana, araka ny fanadihadiana nataon’ny BNGRC sy ny oniversiten’Antananarivo. 100 ny tokantrano mety hiharan’ny hihotsahan’ny tany eny Manjakamiadana. Ho fisorohana sahady, nametraka lakandrano handehanan’ny rotsak’orana ny mponina nanao asa tana-maro. Nisy fitaovana telo natao handrefy ny hamandoana, afaka manaitra ny komitin’ny vonjy […]
« Précédent 1 … 1 585 1 586 1 587 1 588 1 589 … 1 596 Suivant »